Iindaba - 2021 eMunich Shanghai Electronics Show
Ngo-2021 uMboniso we-Elektroniki wase-Shanghai
Nge-14 ka-Epreli, i-2021 Munich Shanghai Electronics show ivulwe njengoko bekucwangcisiwe, iPudong New International Expo Centre eShanghai. Umxholo wale Expo yalo nyaka uthi "ubulumko bukhokelela kwihlabathi elizayo", bonisa uninzi lwehlabathi elikhokelayo, elikhulu kakhulu, uluhlu olupheleleyo lweemveliso zetekhnoloji ezahlukileyo ezikumgangatho ophezulu. Abameli bethu baya kumboniso.
I-ELECTRONICA i-China yeyona nto ibalulekileyo kwimiboniso ye-elektroniki eMunich, eziqonda ngokuthe gca iimarike zesicelo eshushu ezinje ngemoto ye-Intanethi, i-Intanethi yezinto, i-automation yamashishini, unxibelelwano lwe-5g, njl.njl. izihlanganisi, izinto ezenziwayo, ukuhanjiswa kwamandla, imilinganiselo yovavanyo, itekhnoloji ye-iot, izixhobo ze-elektroniki kunye nokuvavanywa, i-PCB, i-EMS, umboniso kunye nezinye iitekhnoloji, yakha iqonga lokusebenzisana labathengisi be-elektroniki kunye nabathengi beshishini ukuxoxa ngobuchwephesha kunye nokuqhuba utshintsho kumzi mveliso.
Kulo mboniso, asizisanga iimveliso ezininzi ezindala kuphela ngetekhnoloji evuthiweyo, kodwa sikwabonisa neemveliso zamva nje, ezinje ngesantya esiphezulu sokuhambisa iBhodi ngqo kwibhodi yokuxhuma, i-USB TYPE C, ecekeceke ngesitshixo esitshixwayo, iziseko zekhadi lomsebenzi wokukhiya kunye inqanaba lokulinganisa kwemoto kwinqanaba langaphambili leemveliso ezintsha.
I-atom booth ngexesha lomboniso litsale amazwe ahlukeneyo kunye nemimandla yabathengi abasisigxina, abasasazi kunye neenjineli ze-elektroniki, ukuthengwa kwempahla kunye nokunye ukuza kutyelela kunye nokubonisana, abantu beza bahambe, bebaninzi! Abameli bethu bakwanikezela ngolwazi lobungcali kunye nesigulana kumthengi ngamnye ukuba acacise, uthethathethwano lweshishini.
Kwangelo xesha, sithathe nethuba lokudibana kunye nokuthetha nabathengi bethu bakudala. Abathengi abaninzi bakudala bancoma uphuhliso lwethu olukhawulezileyo kunye notshintsho kule minyaka idlulileyo, kwaye siyixabisa kakhulu imveliso yethu kunye neenkonzo. Banentembelo enkulu kwintsebenziswano yokulandela, lindela phambili kwintsebenzo yexesha elide kunye ne-US WIN-WIN!
Umboniso weentsuku ezintathu wafika kwisiphelo esiphumelelayo. Kwimeko yobhubhane, sonwabile kuba lo mboniso ubanjwe ngempumelelo. Idlale indima ebaluleke kakhulu kukhuthazo lwebrand, ukukhutshwa kwemveliso entsha, kunye nokunxibelelana nabathengi abatsha nabadala. Isigcwalisile ngokulindela kunye nethemba ngekamva, ndiqinisekile ukuba i-2021 ATOM iya kuphila, kwaye siya kuqhubeka nokwenza njalo njengesisombululo sokunxibelelana esizinikeleyo! Ubungcali benziwe!